Orylọ ọrụ nrụpụta ọkụ eletrik Factory - China Ndị ọrụ nnapụta ọkụ Ọkụ Manufacturers, Suppliers
Ngini DH65 Sịlịnda, cm3 / cu.in 61.5 / 3.8 Sịlịnda mụụrụ, mm / anụ ọhịa 48 / 1.89 Stroke 34 / 1.34 Idle ọsọ, rpm 2600 Max. ọsọ, ebutu, rpm 9500 Ike, kw 3.5 Nchọpụta usoro Nrụpụta NGK Spark nkwụnye BPMR7A Electrode ọdịiche, mm / anụ ọhịa 0.5 / 0.020 Fuel na lubrication system Manufacturer Walbro Carburetor type HDA-232 Fuel capacity 0.7 Weight Enweghị mmanụ na ịkpụ agụba, kg / lb 9.8 / 21.6 Soundda ụda na ọsọ ọsọ, ụda ụda dB (A) ekwesịghị ...
Igwe na-enye ihe ntanetị setịpụrụ G1000i
Atụmatụ 1, jenerato nke ọ bụla agbanweela ule arụmọrụ siri ike. Ọ gụnyere 50% ibu, 75% ibu, 100% ibu, 110% ibu, ma lelee & nyochaa usoro njikwa niile, ọrụ mkpu na ịkwụsị ọrụ nchedo. 2, ọdịdị ahụ dị obere ma dị mfe, eletriki eletriki nwere ike idozi mmanụ na-akpaghị aka dịka ibu ahụ, ma belata oriri mmanụ na carbon dioxide. 3, ihe ntinye nke ikuku di ọcha nwere ike ibuputa ngwa ngwa elektrọnik niile di elu n'enweghi ...
Obere Rebar cutter
Dị ihe atụ: KROS-25 Ahịa: American QUIP Njirimara: tingchacha: rebar, pipe pipe na cable Anyị enwetawo asambodo German TUV CE. Fechaa, mfe iji Unique wuru-na haịdrọlik mgbapụta Ọ nwere anọ incisions na abụọ UM UBARA. Batrị kwadoro: nwee ike igbutu 25mm rebar maka oge 40 Nkọwapụta nkọwapụta Batrị lithium batrị 24V, 2.0 AH Ibu ibu (ya na batrị) 16kg Oke nbelata arụmọrụ 25mm Cutting Force 16MT Cutting Speed ​​3s
Ikuku akpa ikuku ikuku
Ikuku na-ebuli elu ikuku / ọdụ ikuku ikuku Napụta ndị ahụ e liri site na mkpọmkpọ ebe Nnapụta ọrụ na ala ọma jijiji Nzọpụta na ihe mberede okporo ụzọ Nzọpụta na oghere dịpụrụ adịpụ Uru Uru Nnukwu mbuli, nwere ike ibuli ihe dị arọ site na 1 ton-71 tọn. Ọsọ ọsọ na - ebuli elu (10,000 kgs kwa 4 sekọnd) 24/30 QQDA-31/36 QQDA-40/42 QQDA-54/45 QQDA-64/51 Size (cm) 15 * 15 22.5 * 22.5 30 * 30 38 * 38 45 * 4 ...
Ngwa iku ume nke onwe ya na nkpuchi ihu
PPE Ọkpụkpụ Igwe / CE kwadoro EN 136: 1998 Ngwaọrụ nchekwa iku ume. Ihe nkpuchi ihu zuru ezu. Ihe choro, nyocha, akara. EN 137: 2006 Ngwaọrụ nchebe iku ume. Onwe-meghere emeghe-abịakọrọ ikuku iku ume ngwa na zuru ihu nkpuchi. Ihe choro, nyocha, akara. N'elu echiche Ezigbo ikuku na-eku ume ngwa ngwa bụ ngwaọrụ maka iku ume na nchedo ahụ mmadụ site na iji ikuku abịakọrọ dị ka isi iyi gas. A na-ejikarị ya eme ihe n'ịkụ ọkụ, kemịkalụ, ...
Ihe nlere: JSJ-S Ahịa: Ngwa TOPSKY Ihe mgbapụta ahụ na-emetụta mgbidi miri emi, ụlọ dị elu na nnapụta ọ bụla dị elu. Ejiri ya ihe nchekwa nchekwa nnapụta na mkpọchi nnabata. Ọ dị mfe maka ndị ọrụ iji. Odabara maka ụlọ ọrụ ọkụ na enyemaka. Structure Mainstay, èbè, winch, Mgbanaka echebe Chain, abụọ nhọrọ nna ukwu mkpọchi, 2 systemic njikota, jide-azụ eriri Key Njirimara 1.Scalable ụkwụ na-mere nke elu ike fechaa alloy. Ebumnuche nke nchekwa bụ ...
Ejima hụrụ / sọrọ hụrụ
:Dị ihe atụ: CDE2530 Ngwa CDE2530 a na-ejikarị n'ọhịa Ọkụ, Nnapụta Mberede, Ike Ike, Nkwukọrịta Nkwukọrịta, ụlọ obodo, Demolition na na. Chacha ihe: nchara, ọkpọ ígwè, eriri, aluminom (iji mmanụ mmanu), osisi, mgbidi ahụ, plastik na na. E ji mara ya Ugbu a ọ bụ ngwa ọrụ kachasị dị mma. Ọ na-ewe naanị sekọnd atọ iji mee ka ọnụ ụzọ aluminom mechie. CDE2530 dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi. E wuru ọgụgụ isi nchịkwa na igwe igwe ...
Ngwa MF15A gas nkpuchi bụ a abụọ na-echebe na-eku ume na akụrụngwa nzacha. Ọ nwere ike ichebe ihu ndị ọrụ, anya na akụkụ okuku ume site n'aka ndị ọrụ, ndị ọrụ agha ndu na mmebi ahịhịa ikuku. Enwere ike iji ya maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọrụ ugbo, ọgwụ na ndị ọrụ sayensị na mpaghara dị iche iche yana maka ndị agha, ndị uwe ojii yana iji nchekwa obodo. Ihe mejupụtara na njirimara ya nke ndi nkpuchi nkpuchi ahu, okpukpu abuo na ihe ndi ozo. Nkpuchi iso ...
YYD05-20 Mpịachi Electric Anwụrụ ọkụ wepụ
Nchịkọta YYD05 / 20 nke na-ekpo ọkụ anwụrụ ọkụ eletrik, nke dị obere, dị mfe ibu, dị mfe ịkwaga, nwere ike ịmị anwụrụ ọkụ na oke ọsọ na obere oge, mụbaa oge nnapụta; ike ikuku teknụzụ, nnukwu ikuku ikuku, anwụrụ ọkụ na-adịghị anya site na mita 1-3 site n'ọnụ ụzọ ahụ, dabara nke ọma belata ogo nke ọkụ ọkụ, meziwanye ọhụhụ n'ime ụlọ ahụ, na-achịkwa ọkụ na isi iyi ọkụ na ụlọ, belata nsị nsí, zere ọkụ ọkụ ...
BS80 Njikọ mgbasa eletrik
Okwu Mmalite Mgbatị ọkụ eletrik na mgbasawanye, ịkwa ákwá, ijigide na ịdọrọ ọrụ (ya na eriri traction), nwere ike ịrụ ọrụ nnapụta dị elu, na-eji akwa alloy dị elu. Enwere ike imeghe ya n'ime 1 nke abụọ nke nwere ike belata usoro nnapụta. A na-ebo ebubo batrị lithium 4AH abụọ buru ibu na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma rụọ ọrụ ogologo oge iji gboo mkpa nke gburugburu nnapụta dị mgbagwoju anya. Main oru parameters ated Gosiri ọrụ mgbali 72MPa Mgbasa anya 650mm Max. kpo ...
BC80 Egwuregwu ọkụ ọkụ
Okwu Mmalite Ndị na-egbu ihe eletriki nwere ike belata pipelines ngwa ngwa, nchara nchara pụrụ iche na mbadamba ígwè nke ihe ụgbọ ala na akụkụ ígwè. Enwere ike mepee ya n'ime 1s nke nwere ike belata usoro nnapụta. Enwere ike ịgbaji batrị lithium abụọ buru ibu-4AH nwere ike ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa ma oge ọrụ nwere ike ịdị ogologo. Izute mkpa nke gburugburu nnapụta dị mgbagwoju anya. Main oru parameters ated gosiri ọrụ mgbali 80MPa shiee ike 680KN tingcha gburugburu ígwè dayameta (Q235 ihe) ...
Isi Ngwunye ihe eji egwu ọkụ bụ ihe eji arụ ọrụ mgbapụta, eji eji igbasa na ịgbasa ọrụ nnapụta; onwe onwem onwem ọkọnọ, ọ dịghị mkpa nke mpụga ike ngwaọrụ, tubingless imewe obere ọrụ mgbe ọ bụla na n'ebe ọ bụla o kwere omume; ihe ndị bụ isi jiri Aluminom Alloy na-arụ ụgbọelu, ike dị elu, ịdị arọ; mechie ihe niile si na Germany. Mgbapụta ngwa na ihe mberede okporo ụzọ, ihe ọghọm ọdachi, ọkachasị dabara maka nnapụta dị elu na ọrụ ubi ...